Ku Qoro Warqadayda Muddada Wakhtiga Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Ku qor warqaddayda waqtigeyga ah Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Sida Loo Qoro Warqaddayda Muddada
Ardaydu waa inay qoraan waraaqaha teeramka ujeeddooyin tacliimeed oo keliya. Waraaqdani guud ahaan way gaaban tahay dherer ahaan. Ardaygu waa inuu macluumaad ka helaa ilo badan oo si taxaddar leh u falanqeeyaa xogta. Mashruucani si weyn ayuu u saameeyaa darajadaada. Waxaa jira dhowr talaabo oo ay tahay inaad raacdo markaad qoraysid warqad erey tacliimeed. Waa inaad u samaysaa dhammaan qabanqaabada lagama maarmaanka u ah warqaddaada.
Dalbo nuqul ka mid ah warqadda ereyga oo aad hesho dhammaan agabyada loogu baahan yahay shaqada la qabtay. Samee dulmar ah mawduuca ka dibna qorshee habka aad u dhammaystirayso. Go'aanso inaad ku iibsanayso nuqul daabacan ama aad ku dalbanayso nuqul khadka tooska ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad dalbato nuqul khadka tooska ah dartiis fudeyd iyo fudeyd darteed.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso ka hor intaadan qorin warqaddaada waa inaad u diyaariso alaabadaada cilmi baaris. Waxaad isticmaali kartaa ilaha internetka ama waxaad isticmaali kartaa buugaag. Buugaagta ayaa si fudud loo akhriyi karaa marka loo eego ilaha internetka. Haddii aadan haysan waxyaabo badan oo cilmi baaris ah oo diyaar ah, waxaad ka amaahan kartaa buugaag maktabadaha.
Waxaad u baahan tahay inaad dalbato nuqul ka mid ah warqaddaada oo aad si taxaddar leh u akhrido. Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah warqadda ereyga. Haddii xaashida aan si fiican loo qorin, waxay noqon laheyd mid aan waxtar lahayn. Ardaydu waa inay isku dayaan inay hubiyaan in warqaddu leedahay macno cad, hufnaan iyo qaabka wax loo qoro. Sidoo kale waa inay awoodaan inay si waadix ah u soo bandhigaan fikradahooda.
Markaad dalbanayso warqaddaada, amarku waa inuu la mid ahaadaa amarkii lagu siiyay jaamacadda. Xaqiiqdii, jaamacaddu xitaa waxay kuugu soo diri kartaa warqadda si bilaash ah. Markaa kadib waa inaad bilowdaa inaad baarto oo aad hesho macluumaadka ku saabsan waxaad u baahan tahay. Waa inaad heshaa dhammaan macluumaadka ku saabsan amarka adoo ka hubinaya jaamacadda ama dugsiga aad wax ku baraneyso.
Dalbo warqaddaada adoo maraya buugga jaamacadda ama weydiinaya miiska caawinta. Way fiicantahay inaad si taxadar leh u aqriso amarka si aad u fahamto ereyada la isticmaalay iskana ilaaliso qaladaadka. Sidoo kale waa inaad u aragtaa amarka oo buuxa marka aad dalbanayso sababtoo ah. Dalbo taariikhda iyo nooca warqad.
Waa inaad had iyo jeer ku darto tixraacyada waqtigaaga warqadda haddii aad rabto inaad hubiso in cilmi-baaristu ay sax tahay oo asal tahay. Ka dib markaad dhamayso, waxaad u baahan tahay inaad saxiixdo foomka ama aad saxiixdo. si loo hubiyo inaad fahantay amarka oo dhan. Aad bay muhiim u tahay in lagu daro dhammaan faahfaahinta warqadda oo aad haysato nuqul dhammaan bogagga. Haddii aad wax sixitaan ah leedahay, waxaa fiican inaad warqadda u gudbiso maktabadda si ay iyaga u hubiyaan.
Haddii aad dareento inaad heshay amar qaldan, waxaad u baahan tahay inaad caddeynta ka hesho kulliyadda ama jaamacadda. Xitaa waxaad ka heli kartaa iyaga adoo ka dalbaya internetka ama ilo kale. Fikradda ugu weyni waa inaad soo gudbiso warqadda ka dib markaad hesho caddayntaada.
Markaad warqaddaada u dirto maktabadda, hubi inay dhammaan waraaqaha iyo nidaamkiisu sax yihiin. Tani waxay ka hortagi doontaa wax dhibaato ah mar dambe. Markaad dhamayso, waa inaad saxeexdo waraaqaha. Waa inaad taxaddartaa inaad buuxiso dhammaan foomamka waraaqaha macluumaadka saxda ah. Haddii aad rabto inaad ku darto waraaqaha qaarkood, waa inaad hubisaa in waraaqaha aad ku daraysaa aysan ka hor imaanayn foomamka warqadda.
Waa inaadan ka waaban inaad saxiixdo warqadda ama aad beddesho warqadda waqti kasta. Markaad dhamayso warqadda, waa inaad dib ugu celisaa dugsiga. Ka dib markaad hesho, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad amarka si sax ah u samaysay. si aan dib loogu soo celin isbadal la’aan. waxaad u baahan tahay inaad dib ugu laabato maktabadda oo aad aragto haddii aad heshay warqaddii iyo in kale.
Hubso inaadan iloobin inaad weydiisato caddeyn warqadda ah. Tani waa mid aad muhiim u ah. Haddii aad ilowdo inaad weydiisato caddeyn, jaamacaddu waxay kuu soo celin kartaa warqaddaada iyadoo aan lagu siinin wax sabab ah.
Waa inaad hubisaa inaad haysato warqad tixraac ah oo aad gacanta ku hayso si aad u hubiso inaad wax walba u sameysay qaab. Tani aad ayey muhiim u tahay maxaa yeelay waxaa jiri kara xaalado ay ardaydu iloobaan inay dib ugu soo celiyaan maktabadda.